Sida loo taabto rinji jajaban - aru-ua - dieselboss
Sida loo taabto rinji jajaban – aru-ua
Si kasta oo aad u daryeesho baaskiilkaaga, mar ka mid ah waxa aad si lama filaan ah u heli doontaa jajab ku jira rinjigiisa dhalaalaya. Inkastoo tani aysan u badneyn inay waxyeeleyso jir-dhiska, waxay ka dhigi doontaa baaskiilkaaga qurux yar. Laakin ha werwerin, dheri rinji ah iyo aqoon yar, waxaad ka tirtiri kartaa nabarradaas foosha xun.
Sida loo taabto rinjiga la jarjaray
1. Xaddidaadda dhaawaca
Chips-yar-yar ma baabi’in doonaan aluminium ama birta. Iyagu sidoo kale uma badna inay saameeyaan kaarboonka, laakiin ka hor inta aanad bilaabin, laba jeer hubi in kaarboonka ku hareeraysan aanu dareemin xabxab marka la tuujiyo. Ka fiirso dildilaaca ka soo baxa bartamaha.
Chips-ka aan la daawayn uma badna inay dhaawac halis ah u geystaan ​​rinjigaaga. Xataa xargaha birta ah, meelaha daxalka ah ee dusha sare ma saameeyaan qaab dhismeedka tuubada. Si kastaba ha ahaatee, way fiican tahay in baaskiilkaagu u ekaado mid qurux badan.
Entrada anteriorAnterior ▷▷ 2021 ▷ Valor neto de Tom Cruise
Entrada siguienteSiguiente Cómo encender la linterna de tu teléfono Android de 3 formas diferentes